प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - Zaili इन्जीनियरिंग मशीनरी कं, लिमिटेड
तपाईं निर्माता वा ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ?
हामी एक वास्तविक निर्माता हो, zaili निर्माण मशीनरी सह। लि। २०१२ मा स्थापित भएको थियो।
के तपाई ग्राहकहरुका डिजाईन अनुसार ब्रेकर उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, OEM / ODM सेवा उपलब्ध छ। हामी चीन मा १ years बर्षको लागि पेशेवर निर्माता हो।
MOQ र भुक्तानी सर्तहरू के हो?
MOQ १ सेट छ। T / T, L / C, वेस्टर्न यूनियन मार्फत भुक्तानी स्वीकार गरिन्छ, अन्य सर्तहरू सम्झौता गर्न सकिन्छ।
7-10 कार्य दिनहरू अर्डर मात्राको बिरूद्ध
१ding महिनाको ग्यारेन्टी हाइड्रोलिक ब्रेकरहरूका लागि बिलि date मितिको बिलको बिरूद्ध। तपाईंको मागहरू पूरा गर्न २ hour घण्टा प्रम्प्ट बिक्री पछि सेवा।
तपाईं कसरी वितरण भन्दा पहिले ब्रेकर परीक्षण गर्नुहुन्छ?
प्रत्येक हाइड्रोलिक ब्रेकरले बिक्री अघि प्रभाव परीक्षण गर्नेछ।
कुन देशहरूमा तपाइँले तपाइँको हाइड्रोलिक ब्रेकरहरू आपूर्ति गर्नुहुन्छ?
हाम्रा हाइड्रोलिक ब्रेकरहरू अमेरिका, युरोप अष्ट्रेलिया, दक्षिणपूर्व एशिया र अफ्रिकालगायत विश्वका more० भन्दा बढी देशहरूमा बेचिन्छन्।
के म मेरो आफ्नै ब्रान्डको साथ पहिलो पटक अर्डर गर्न सक्छु?
हो, हामी OEM सेवा प्रदान गर्दछौं। तपाईं हामीलाई आफ्नो लोगो वा ब्रान्ड नाम पठाउन सक्नुहुनेछ, हामी यसलाई निर्माण गर्नेछौं।
त्यहाँ मार्केटमा धेरै कम मूल्य भएका हथौड़ों छन् लामो वारेन्टी। किन यो हो र तपाईं मलाई यस्तो हतौडा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी त्यस्ता हथौड़ों पनि प्रस्ताव गर्छौं। लामो वारेन्टीहरू मुख्यतया एक आँखै आकर्षक बनाउने बिक्री चाल हो। विस्तारित वारेन्टीले सामान्यतया ती भागहरूलाई मात्र समेट्छ जुन सामान्य रूपमा धेरै वर्षसम्म असफल हुँदैन। सस्तो, यति राम्रो गुणस्तरको हथौड़ाले यी नक्कल वारन्टीहरू प्रदान गर्दछ। कम मूल्य-सीमित वारेन्टीहरूको साथसाथै धेरै सस्तो ब्रान्डले उनीहरूको हथौड़ोंको फिट एलबीएस वर्ग शक्ति बढाबढाइ गर्छ। धेरै चीजहरूको साथ एक सामान्य नियमको रूपमा, यदि मूल्य सस्तो छ भने गुणवत्ता हो!
यो सबै बरु उल्टो भइरहेको छ। मलाई कुन हतौडा चाहिन्छ? मलाई कस्तो उर्जा कक्षा चाहिन्छ? यो सब बरु भ्रमपूर्ण छ। मलाई कुन हतौडा चाहिन्छ? मलाई कुन ऊर्जा वर्ग चाहिन्छ?
हामीलाई तपाईंको क्यारियर, सामान्य रोजगार अनुप्रयोग, प्रति वर्ष प्रयोग अपेक्षित घण्टा र तपाईंको बजेटको बारेमा सबै बताउनुहोस् र हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं र विभिन्न ब्रान्ड र विकल्पहरू संकुचित गर्नेछौं तपाईंलाई छनौट गर्नको लागि।
जब तपाइँ हतौडाको लागि मलाई उद्धृत गर्नुहुन्छ यसमा केमा सामान्य रूपमा समावेश हुन्छ?
हामी अक्सर तपाईंलाई प्याकेजको मूल्य उद्धृत गर्नेछौं जसमा समावेश छ: हाइड्रोलिक हथौड़ा, दुई नयाँ उपकरण बिट, दुई होज, माउन्टिंग ब्रेकेट, पिन र बुश किट्स, नाइट्रोजन बोतल, सील किट्स, चार्ज किट। हामी बिक्रीको बिन्दुमा सबै कुरा स्पष्ट पार्नेछौं। कुनै लुकेका एक्स्ट्रा छैनन्।
मैले एउटा डिलरबाट एउटा हथौडा किनेको थिएँ जसले सबै प्रकारको धरती हिसाब उपकरणहरू बेच्दछन् र अब मैले कुनै सहयोग वा समर्थन पाइरहेको छैन। म के गर्न सक्छु?
यो सामान्य समस्या हो। यदि तपाईंलाई समर्थन चाहिएको छैन भने तपाईंको डिलरको मुख्य व्यवसाय हथौड़ा होईन वा हुनसक्छ उहाँलाई तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर थाहा छैन भने कृपया हामीलाई फोन गर्नुहोस्। हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौं कि हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं, तर यदि हामी सक्दछौं, हामी तपाईंलाई जे भए पनि सहयोग गर्नेछौं। हामीलाई मतलब छैन कि तपाईंले आफ्नो हतौडा किन्नु भयो। यदि तपाईं अडिनुभयो र मद्दतको आवश्यकता छ भने, हामीलाई कल गर्नुहोस्। हामीबाट मद्दत लिन तपाईले हामीबाट केहि किन्नु पर्दैन। यदि हामी मद्दत गर्न सक्दछौं भने हामी गर्दछौं।
मसँग कतै प्रयोग गरिएको किनिएको हतौडा छ। मलाई थाहा छैन यो कुन ब्रान्ड हो? मलाई यसको समस्या छ, म के गर्न सक्छु? म कसरी यसको लागि भागहरू लिन सक्छु? के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामीलाई कल दिनुहोस् र हामीलाई जतिसक्दो जानकारी दिनुहोस्। हामी सँधै सकारात्मक परिणामको आश्वासन दिन सक्दैनौं तर हामी तपाईंको हथौडा पहिचान गर्न सक्दो कोशिश गर्नेछौं। कृपया हामीलाई तपाईंको हथौडाको चित्र ईमेल गर्नुहोस् र यसमा मोहर गरिएको कुनै पनि नम्बर सहित। यसले हामीलाई तपाईंको हथौडा ठीक रूपमा पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
उत्खननका लागि पल्भरइजर, खुदाका लागि क्रसर, उत्खननका लागि कतरन, एचबी श्रृंखला ब्रेकर, मौन प्रकार ब्रेकर, ब्रेकरको लागि नियन्त्रण भल्भ,